Astaamaha iyo sameynta cirifka cirifka | Saadaasha Shabakadda
Xaqiiqdii weligaa waad maqashay nalalka waqooyiga oo waxaad rabtay inaad aragto dhacdadan cajiibka ah ee dabiiciga ah. Kuwani waa nalal ifaya oo cirka caadi ahaan cagaaran. Kuwa ka dhaca aagga cirifka waxaa loo yaqaan polar auroras. Marka xigta waxaan si faahfaahsan u sharxi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato polar aurora iyo astaamahooda.
Haddii aad rabto inaad u safarto adduunka oo dhan si aad ugu tagto tiirarka oo aad u aragto auroras-ka quruxda badan, kaliya aqriso maqaalkan.
1 Astaamaha alarra-ka
2 Muxuu polar aurora u sameysmaa?
3 Sida loo soo saaro
4 Dhaqdhaqaaqa firfircoonida polar aurora
Marka cirifka woqooyi laga arko cirifka woqooyi waxaa loogu yeeraa nalalka woqooyi iyo markii laga arko cirifka koonfureed auroraska koonfureed. Sifooyinka labaduba waa isku mid maadaama ay isku asal ka soo jeedaan. Si kastaba ha noqotee, taariikhda oo dhan, nalalka woqooyi waligoodba way ka muhiimsanaayeen.
Dhacdooyinkan dabiiciga ah waxay bixiyaan aragti lagu taliyay inaad aragto hal mar noloshaada. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah in saadaasheeda ay tahay mid aad u cakiran safarka aagagga ay ka dhaceysona uu yahay mid aad qaali u ah. Qiyaas inaad bixiso lacag fiican oo safar ah si aad u aragto Nalalka Woqooyi ee ka imanaya Greenland oo ay soo baxday in maalmuhu socdaan oo ay meelna haysan. Waa inaad ka weecato adigoo gacan madhan oo aad ka qoomamayso inaadan arki karin.
Waxa ugu caansan ee auroraskan ayaa ah in midabka cagaaran uu yahay kan ugu badan. Jaale, buluug, oranjo, violet iyo xitaa midabada casaanka sidoo kale waa la arki karaa. Midabadan ayaa u muuqda dhibco yar yar oo iftiin ah oo ay ku samaysan karaan qaanso yar yar oo cirka isku shareeraya. Midabka ugu badan had iyo jeer waa cagaar.
Meelaha lagu arki karo inta badan waa Alaska, Greenland, iyo Canada (eeg Nalalka Woqooyi ee Norway). Si kastaba ha noqotee, waxaa laga arki karaa meelo kale oo badan oo Dunida ka mid ah, in kasta oo ay aad u yar yihiin. Xitaa waxaa jiray xaalado laga soo sheegay aragtideeda meelaha u dhow dhulbaraha.
Muxuu polar aurora u sameysmaa?
Waxa saynisyahano badani raadinayeen sanadihii la soo dhaafay waa sida iyo sababta ay u samaysmaan aaladda cirifka. Waa natiijada is-dhexgalka qorraxda iyo dhulka. Jawiga Cadceedu wuxuu soo saaraa gaasas isdaba joog ah oo ku jira xaalad plasma ah oo ay ku jiraan walxo koronto ku shaqeeya. Qaybahaasi waxay ku dhex wareegaan hawada illaa ay ka gaarayaan dhulka saamaynta cuf isjiidadka iyo soojiidashada dhulka.
Markay gaadho meel sare jawiga waxaa laga daawan karaa cirka. Qaabka ay Qorraxdu ugu dirto walxahaas meelaha oo dhan iyo, gaar ahaan, dhulka waa iyada oo loo marayo dabaysha qorraxda. Dabaysha cadceedda Waxay u keeni kartaa dhaawac culus nidaamyada isgaarsiinta ee dhulkeenna waxayna abuuri kartaa shil adduunka oo dhan ka dhaca. Qiyaas in lagaa goynayo muddo dheer koronto la’aan noocay doontaba ha noqotee.
Walxaha ku kaca kharashka korontada waxay ku dhacaan iskudhafka gaaska ee magnetosphere-ka dunida. Waxaan xasuusan nahay in dhulkeenu leeyahay aag magnet ah oo u weeciya inta badan shucaaca elektromagnetic-ka una wareejinaya bannaanka hore. Magnetosphere-kan waxaa sameeya xoogag ka dhashay aagga magnetka.
Sababta ay aurorasku ugu soo noqnoqoto tiirarka isla markaana aysan ugu ekaanin dhulbaraha waxaa weeye maadada magnetic-ka ayaa ka xoog badan tiirarka marka loo eego dhulbaraha Sidaa darteed, walxaha korantada ku shaqeeya ee dabaysha qorraxda waxay ku dhaqaaqdaa khadadkaas oo sameeya magnetosphere. Marka walxaha dabaysha qorraxda ay isku dhacaan gaasaska magnetosphere, nalalka ayaa la soo saaraa oo lagu arki karo oo keliya iyadoo ay ku janjeedhaan falaadhaha qorraxda.
Isku dhaca ay soo saaraan electron-ka iyo gaasaska magnetosphere ayaa ah waxa ka dhigaya proton-ka mid xorriyad leh oo muuqda isla markaana auroraskan asalkiisu ka soo jeedo. Guud ahaan waa auroras daciif ah, laakiin markay ka gudbaan magnetosphere-ka waxay ku ordaan gobollada cirifka halkaas oo oksijiinyada iyo atomamka nitrogen ay ka dhigayaan kuwo ifaya. Atamka iyo molikiyuullada hela tamarta elektaroonikada ka timaadda dabaysha cadceedda waxay gaadhayaan heer sare oo tamar ah oo ay ku sii daayaan qaab iftiin ah.
Polar aurora badanaa waxay dhacdaa inta udhaxeysa 80 iyo 500 km. Waa wax iska caadi ah in kolba sida loo abuuro auroras-yada, in ka yar la arki karo iyo faahfaahin yar. Dhererka ugu sareeya ee lagu qoro alarra polar waa 640 kilomitir.
Midabka, waxay inbadan kuxirantahay walxaha gaaska ay iskula dhacaan elektaroonikada. Atamka oksijiin ee ay isku dhacaan waa kuwa soo saara iftiinka cagaaran. Markay isku dhacaan atamyada nitrogen-ka waxay u muuqataa midab u dhexeeya buluug iyo buluug. Haddii ay isku dhacaan atomyada oksijiinta laakiin dhererkoodu yahay 241 illaa 321 km waxaa lagu muujin doonaa casaan. Tani waa sababta ay u yeelan karaan midabbo kala duwan, laakiin badanaa waa cagaar.
Dhaqdhaqaaqa firfircoonida polar aurora
Ka soo horjeedka caqiidada caanka ah, ma ahan ifafaale la xiriira habeenka iyo mugdiga. Taas bedelkeed, waxay dhici karaan wakhti kasta oo maalinta ah. Dhibaatadu waxay tahay iftiinka qoraxda si fiican looma arki karo oo muuqaalka dabiiciga lama qadariyo. Wasakhda nalka ayaa iyana ah qodob kale oo xisaabta lagu darsado.
Jaleecada hore, waxay umuuqataa in polar aurora uu wali taagan yahay isagoon dhaqaaqin. Si kastaba ha noqotee, markay gaarto saqbadhkii, qaansoleyda ay samaystaan ​​waxay bilaabaan inay wareegaan illaa ay ka qaataan qaabka daruurta oo ay baaba'aan markay waaberiga yihiin.
Haddii aad rabto inaad aragto, waqtiyada iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo auroraska 'polar auroras' waa habeenkii iyo gobollada cirifka. In ka badan kalabar habeennada sannadka ayaa ku raaxeysan kara auroras-ka polar Marka, haddii aad ka fekereyso inaad u tagto iyaga, raadi meesha ugu wanaagsan iyo waqtiga ugu habboon.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto alarra polar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Polar aurora